Fitsaboana antipyretika, fanafody famonoana otrikaretina, fitsaboana otrikaina - Depond
machineries fanafody, fitaovana famonosana ary
Vahaolana povidone 5%
Ny tsindrona Iron Dextran
Albendazole 2,5% mampiato
Oxytetracycline soluble vovoka 50%
Vahaolana am-bava Florfenicol
Momba ny famaritan'ny orinasa
Hebei Depond Animal Health Technology Co, Ltd dia niorina tamin'ny 9 septambra 1999 ka andiana famokarana 13 GMP. Ny orinasanay, satria iray amin'ny orinasa 500 fitsaboana medaly veterinera any Chine, dia nanjary orinasa lehibe fanta-daza natokana ho an'ny fikarohana sy ny famokarana vokatra momba ny fahasalamana biby. Any am-paritany Mengtong ao Shijiazhuang ny tranobainay dia misy toby famokarana mandroso izay misy faritra 30000 metatra toradroa ary manodidina ny 350 mpiasa. Manana tsipika famokarana 13 arakaraka ny fenitry ny GMP sy ny vokatra 300 mahery izahay, anisan'izany ny ranon-tsosotra am-bava, takelaka, granita, spray, oiniment, fitrandrahana ahitra, tsindrona, vovony fanafody tandrefana, fanesorana ny ahitra ary disinfectants.
Vaovao momba antsika
2019 Nandeha tamim-pahombiazana ny Depond tamin'ny fanaraha-maso Sudan GMP
Nanomboka ny 15 ka hatramin'ny 19 desambra 2019 dia nanaiky ny fanekena sy ny fankatoavan'ny Ministeran'ny fambolena any Sudan ... i Hebei Depond ...
2019 nandalo tamim-pahombiazana i Depond tamin'ny alàlan'ny GMP Ethiopia tamin'ny ...
Nanomboka ny 21 ka hatramin'ny 23 Oktobra 2019 dia nanaiky ny fanekena sy ny fankatoavan'ny Ministeran'ny fambolena any Etiopia i Hebei Depond. Ny ekipa mpanara-maso dia nandalo ny fisavana ny tapak'andro telo andro sy ny antontan-taratasy ...
2019 nandalo tamim-pahombiazana ny Depond ...
Nanomboka ny 19 ka hatramin'ny 20 oktobra 2019 dia nanatanteraka fizahana biby vaovao 5 taona tany ho any ny Depond, Hebei, miaraka amin'ny fandraisana anjara ... ny vondron'ny dokam-barotra GMP fanafody veterana ao amin'ny faritany Hebei.
2019 Depond in faha-17 any Shina Iraisam-pirenena ...
Ny 18 mey 2019 no nosokafana ny 17-taona (2019) China Animal Husbandry Expo ary 2019 ny International International Hus Husryry Expo ao Wuhan International Expo Center. Miaraka amin'ny tanjona sy iraka fanavaozana ...
Ireo mpampita vaovao, vaovao farany momba ny vokatra, vaovao sy tolotra manokana.
Varotra (whatsapp): 0086-15833990707
Varotra (whatsapp): 0086-13933828863
Alatsinainy - alahady: 9 maraina ka hatramin'ny 6 ora